IITATTOOS EZIHLANYAYO EZINGAMA-75 ZAMADODA-IINGCAMANGO EZIBUKHALI ZOYILO - UHLOBO
IiTattoos eziHlanyayo ezingama-75 zaMadoda-Iingcamango eziBukhali zoyilo
IiTattoos zimele abantu abazinxibileyo. Abantu bemveli bayazonwabela iitatoo zesiko kwaye abantu ababodwa bayayonwabela iitatoo ezizodwa. Ngethamsanqa okwahlukileyo, kukho iitoni zokukhetha ukumela ubuntu bakho.
I tattoo yesizwe ibonakala ngathi iphelelwe lixesha kodwa enyanisweni, yenye yeendlela zokuthambisa ezinokuhlala zahlukile kwaye zibodwa.
Ukufumana isiqwenga somntu othile ngobungcali ngokuqinisekileyo kuya kwenza ingxelo enesibindi, kuxhase iingxoxo kunye nokushiya umboniso owahlukileyo, ohlala ixesha elide emzimbeni wakho ngonaphakade.
Ukuba ufuna i-starter yencoko ngokwenene, cinga ngokwenza i-3D tattoo. Amagcisa anetalente anokwenza ukukhanya okuyinyani kulusu lwakho oluya kuthi lube nabantu abangakwaziyo ukujika amehlo abo. Ezi tattoo zifana nobomi kwaye ngokungathandabuzekiyo zixelela ibali abantu abaya kuba nomdla wokukubuza ngalo.
Imizobo ingumbono olungileyo we tattoo ephambeneyo, eyahlukileyo. Imizobo kufuneka yenziwe ligcisa elinobuchule obukhulu ukuba yenziwe ngokuchanekileyo, ke khetha kwaye ukhethe umculi olungileyo. Yindlela yokubonisa uthando okanye ukuncoma, kwaye sisiqwenga esikhethekileyo esiya kujongeka sikhulu kwiminyaka ezayo. Kwiminyaka yakutshanje, iifoto zabalinganiswa beemovie okanye iiqhawe ezinkulu ziye zathandwa ngakumbi, ezinikezela nge-surreal, kodwa ukubukeka okumangalisayo kwi-inki emzimbeni wakho.
Ukuba ukhangele into ethile ngaphandle kwesiqhelo, zama i-UV tattoo. Ezi tatto zenziwe ngeinki ezibengezela ngokubonakalayo kuphela phantsi kwezibane ze-ultraviolet. Olu lukhetho olukhulu kubantu abafuna ukwahluka. Abanye abantu kufuneka bafihle iitattoos ngezizathu ezahlukeneyo kwaye olu lukhetho olukhulu kubo.
Nangona kunjalo, ukuba awukhathali ukuba ngubani obona iitattoos, ii-UV tattoos ziyothusa kwaye ziyingxoxo yencoko kwabo bangaziyo ukuba bakhona!
kwigumbi lokuhlala imibono yokukhanya kwesilingi
Igumbi elifanelekileyo lamantombazana afikisayo
Iitattoos ezingamama-intombi ezizodwa
Umvambo we sunflower omnyama nengwevu
indlela yokucheba iinwele zamakhwenkwe
Isiqingatha senyanga isiqingatha selanga
iinwele ezinde zamadoda aneenwele ezigobileyo
iitattoo zengalo ezincinci zabafazi